कसले दिदैछ प्रधानमन्त्रि ओलीलाई फेरी मृ’गौला ? कति खर्च लाग्छ ? – Life Nepali
कसले दिदैछ प्रधानमन्त्रि ओलीलाई फेरी मृ’गौला ? कति खर्च लाग्छ ?
काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मृगौला पुनः प्रत्यारोपण गर्न अमेरिका जाने भएका छन् । उनले अहिले चलिरहेको हेमोडायलासिस नगरेर पुनः मिर्गाैला प्रत्यारोपण गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन्। प्रधानमन्त्रीकी निजि चिकित्सक अमेरिका पुगेर पुनः प्रत्यारोपणको जोखिम र नयाँ प्रविधिबारे बुझेर नेपाल फर्किएकी छन् । उनि फर्केपछि अमेरिकामै उपचारको लागि जाने तय भएको स्रोतले बताएको छ।
ओलीको म्रोगौला प्रत्यारोपणका लागि छिमेकी देश चीन र भारतले पनि अफर गरेको बुझिएको छ । केहि महिना अगाडी मात्र सिङ्गापुरमा एन्टीबडी नस्ट गरेर फर्केका ओलीको मृगौलाले काम गर्न छाडेकाले टोखास्थित ग्राण्डी अस्पतालमा ३ पटक डाइलासिस गराइएको छ । मिर्गाैला प्रत्यारोपण गर्ने सम्बन्धमा भने प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना निजी चिकित्सकका साथै आफन्तहरूसँग सल्लाह गरिरहेको बुझिएको छ ।
उनको उपचार अत्याधुनिक प्रविधिबाट गरिने भएकोले खर्च भने निकै महङ्गो हुने, करोडौँ रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । ‘यत्ति नै लाग्छ भन्ने यकिन भैसकेको छैन तर निकै महङ्गो लाग्ने अनुमान छ ।’ बालुवाटार स्रोतले बतायो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिइने मृ’गौलाको परिक्षण भैसकेको स्रोतले जनाएको छ । कसले दिने भन्ने बाहिर खुलाइएको छैन तर ओलीकै गृहजिल्लाका एक व्यक्तिले दिने भनिएको छ स्रोतले भन्यो ।
प्रधानमन्त्री ओली फेरि एक पटक मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि विदेश जानुअघि नै पार्टी र सरकारलाई चुस्त बनाउन चाहेको स्रोतले जनाएको छ  । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रालय सञ्चालनमा कमजोर कार्यक्षमता देखाएका मन्त्रीलाई बिदाइ, केहीको जिम्मेवारी हेरफेर र नयाँ मन्त्री नियुक्तिको काम तत्काल टुंग्याउन चाहेको बताएको छ।
Previous चाउचाउले मुटु, हड्डी र बुद्धि भ्रष्ट गराउँछः डा. उप्रेती
Next महिलाको इ’ज्जत दुई तिघ्रा’को बीचमा लुकेको हुन्छ डा.अरुणा
बच्चाहरुलाई सडकबाट उठाएर ल्याएकी नायिका प्रिती जिन्टाले गर्छिन आफ्नौ सन्तानलाई जस्तै माया
प्रेमीसँग रं’गेहात समातिएपछि महिलाले खन्याइन् पतिको गोप्य अं’गमा ते’जा’ब
फलानाकी छोरी र ढिस्कानाकी श्रीमती हुनुपूर्व ‘म’ बन्नुस्
आज नारी दिवसको अवसर पारेर श्रीमतीले श्रीमान बोकेर दौडने प्रतियोगिता तनहुँको देबघाटमा